Toy ny ahoana izany sakafo voalanjalanja ?
Voaresaka matetika ny hoe tokony hisakafo voalanjalanja tsara ny olona tsirairay mba ho salama. Toy ny ahoana marina anefa izany ?
Rehefa noana vao mihinana
Isaky ny hisakafo, dia tokony hanontany tena hoe : tena noana marina ve sa te hitsakotsako fotsiny.
Mba ho azo antoka fa voalanjalanja ny sakafo hanina dia tsara raha ianao mihitsy no mahandro sy mikarakara azy.
Mihinana milamina tsara
Sarotra levonina ny sakafo hohanina ao anaty rotoroto. Aleo mitombina tsara rehefa hisakafo.
Ovaovaina ny karazan-tsakafo
Mba hahazoan’ny vatana otrikaina feno dia ovaovay foana ny karazan-tsakafo hohanina.
Fadio ny sakafo be kaloria
Aleo tsy mihinana sakafo be siramamy sy be menaka kanefa tsy mitondra otrikaina mineraly, vitamina ary “fibres”. Tena ilaina ny “fibres” satria manamora ny fiasan’ny tsinay sy ny taova fandevonan-kanina.
Mihinana voankazo sy legioma foana
Ny legioma sy ny voankazo no feno vitamina sy otrikaina ary “fibres”. Ampidiro amin’ny sakafo hohanina foana izy ireo isan’andro.
Tsy atao ambanin-javatra ny proteina
Tsy maintsy misy proteina ny sakafo vao antsoina hoe, voalanjalanja. Ahazoana proteina ohatra ny trondro, atody ary hena na voamaina sy soja.
Ilaina ihany ny gliosida
Ny gliosida no toy ny solika ho an’ny vatana. Tsy ilay karazany mora levona kosa anefa fa ireo izay ela vao levona toy ny “cereales”, ny vary, ny mofo feno otrikaina ary ny voamaina.
Mila menaka koa
Mila menaka koa ny vatana. Ny sakafo misy « oméga 3 » no tena mety ho an’ny fahasalamana. Ahitana azy ny menaka colza, ny trondro matavy toy ny thon, saumon ary sardines, ny voan-javatra toy ny noix.
Misotro rano tsara
Tokony hisotro rano tsy misy siramamy 1,5 litatra isan’andro farafahakeliny ny olona iray. Ivelan’izay ny ranom-boankazo misy siramamy izay tokony ho ferana koa.